Doorashada Aqalka hoose ee Jawhar oo dib loo furey gudiga doorashooyinka dadbanna go’aan ayey soo sareen. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Doorashada Aqalka hoose ee Jawhar oo dib loo furey gudiga doorashooyinka dadbanna...
Doorashada Aqalka hoose ee Jawhar oo dib loo furey gudiga doorashooyinka dadbanna go’aan ayey soo sareen.
Doorashadii xubnaha aqalka hoose ayaa dib uga bilaabatay magaalada Jowhar, kaddib go’aan laga garay kursigii gacan ka hadalku ka dhashay ee aqalka hoose.
War ka soo baxay guddiga doorahada oo la soo dhigay barta ay ku leeyihiin Twitter -ka ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay kurisgii khilaafku ka dhashay, kaasoo sababay is rasaaseyn ay ku dhaawacmeen ilaa afar ruux.
Guddiga ayaa ogolaaday in laga bilaabo maanta dib loo bilaabo doorashadii xubnaha aqalka hoose oo tan iyo markii ay shaqaaqada ka dhacday Jowhar hakad ku jirray.
Dhawaan ayeey aheyd markii ay tageen magaalada Jowhar guddoonka guddiga doorashada, saraakiil ciidan, iyo danjirayaasha QM iyo midowgga Africa oo dhamaantood kala hadlay maamulka Hirshabeelle iyo guddiga doorashada heer dowlad gobolleed xaqiijinta in doorashadu u dhacdo si nabad-galyo ah.
Ugu danbeyntii, doorashadii maanta ka dhacday Jowhar ayaa lagu doortay saddex xildhibaan, waxaana wali soconaya doorashada xubno kale oo natiijadooda la fillayo goor dhaw.
Previous articleIllaa shan iyo toban kun shaqaale ah oo dawlada dalka Turkigu shaqadii ka eridey.
Next articleGalmudug oo beenisey in musuq maasuq hareeyey doorashada Aqalka hoose.